ZIVO ALL zvinobva Labor
Modified mapurasitiki kuti "vatatu" chinja
The inorganic zvicherwa akadai karusiyamu carbonate upfu inowedzerwa nechigadziko nebwe, wakapata nhatu zvikuru mashandiro kunowedzera, nani kuita ikawanda functionality, inonzi epurasitiki zvekupfakira. Kana kuita kuti asangane, kushandisa upfu, uye zvikuru mutengo rutapudzo basa. Kuderedza uwandu yakavakirwa mafuta-mbishi zvinhu zviri chakaita zvokugadzirwa nebwe kushandiswa, mipiro zvikuru kune vanhu. Sezvo upfumi China kwakaita apinda "itsva kuipa" uye shanduko chimiro zvoupfumi kukura, zvimwe zvinoda itsva pamusoro dzakachinjwa epurasitiki. In General, chiedza, chadzo uye Eco ndiyo remangwana achitungamirirwa indasitiri.
Nokuti inorganic chicherwa upfu arambe achirema kupfuura arambe achirema pamusoro polymer nebwe (2-3 times), vakazadzwa epurasitiki zvinhu arambe achirema kunowedzerawo yekudyidzana nokuda wakawedzera powder. Unit kurema zvinhu inokunda nebwe upfu reshiyo iri mupfupi, nhamba, urefu, nharaunda, nokuti izvo mutengo rinowanikwa, uye kurasikirwa nokuda kuderera kwezvinhu zvine maatomu akafanana izvi kakawanda kudarika zvikomborero kushandisa serisina upfu fillers. Uyezve, kufuta kunowedzerawo pakufamba mari, basa uye dzimwe nyaya. Zvisinei, ongororo akawana, kuburikidza mbishi zvinhu uye rwokugadzira uye midziyo utsanzi, "dambudziko uremu" rinogona kugadziriswa kusvika.
The Munotatamura muitiro
Polypropylene (PP) sandara, pashure anenge katanhatu nguva tensile, karusiyamu carbonate upfu nezvimedu vakapararira PP mamorekuru aumba kubudikidza tatamuka pamusoro maburi zvokuti chete kurema zvinhu, ayo sandara waya pakureba haana dzichinje zvinooneka, saka yakakwirira tensile zvigadzirwa matambudziko uremu haisi pachena.
Furidzira Kuumbwa pamusoro epurasitiki firimu panguva kubudiswa nokuda bidirectional tatamuka, tatamuka reshiyo zvinosiyana zvichienderana Kwakashandiswa micheka, asi kazhinji zviviri kana katatu. Uye wedzera zvakafanana upfu jekiseni rakaumbwa mapurasitiki zvokunyama, arambe achirema pamusoro Varidza firimu iri duku zvikuru.
Test zvabuda akaratidzawo kuti, kunyange jekiseni pehata, kana unogona tenzi jekiseni kufurirwa uye vakabata kuitiswa nguva, zvakaenzana Formulations uye kubudiswa midziyo, kuchinja zvinhu arambe achirema kusvika 3 ~ 4% yayo jekiseni Kuumbwa zvigadzirwa.
Plastic chirungiso Ivan Kuchin musika dziite
Plastic yokuvirisa mupurasitiki zvigadzirwa Nhoroondo kuti inorwara asingasviki 8%, asi ayo pamusoro ehupfumi kuti mapurasitiki kubudiswa uye zvigadzirwa kuvandudza uye kuwedzera basa nayo rinoita basa rinokosha. Kana mamiriro ari polymer Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti, kusarudzwa uye kushandisa yokuvirisa ndiko kuziva budiriro kana kukundikana chigadzirwa kiyi.
Somunhu rutsigiro chinokosha mapurasitiki processing indasitiri, mapurasitiki yokuvirisa mazhinji mumatunhu, padanho chigadzirwa yepamusoro, mutengo, zvakananga kukanganisa uye kuona zvakasiyana-siyana Kuumbwa kwacho uye midziyo kubereka epurasitiki zvibereko yepamusoro uye kukosha. Zvinogona kutaurwa kuti mapurasitiki processing bhizimisi uye mapurasitiki zvigadzirwa kusimudza mitemo epurasitiki yokuvirisa kuti ndiwedzere sezvo pachine!
Mumakore achangopfuura, hwebetsero indasitiri kwakaita wandei mberi nebudiriro. Plasticizer kugadzirwa scale, uye ruzivo rwokugadzira zvinhu, uye zvinogadzirwa unhu uye zvigadzirwa akasiyana uye mumhuri yokugutsikana zvazvingava nguva kuvandudza; karusiyamu zingi kirasi inopisa kugadzikana mutumwa okuita, uye dzakasiyana-siyana uye chikumbiro vhoriyamu nehasha kukura, kutungamirira munyu yakatsiga mumiririri zvinoenderana mberi shoma; hapana halogen, uye vakaderera utsi kuwedzera mhando murazvo retardant mumiririri uye makemikari nesilicon nomurazvo retardant nomumiririri pakukura Kugadzirwa akaita kugona; itsva samolecular mamiriro, uye vakazvitsaurira mhando antioxidant, uye chiedza yakatsiga mumiririri mhando dzose akabudiswa. Uyezve, kemikari achipupuma furo vamiririri, kunokanganisa modifiers uye lubricants, coupling vamiririri, antistatic vamiririri, nucleating vamiririri nezvimwe ebetsero zvinogadzirwa yabudirira zvinokurudzira.
Sezvo 2015 mune imwe indasitiri rokutengesa vari zvishoma pasi, asi matani unotiranga kumucheto kwakavandudza, vamwe kunyange kuonekwa pamusoro dziite zvinhu. In nyaya mapurasitiki indasitiri yose haisi tariro, chigadzirwa kukura kuri nani pane dzimwe mhando. mberi izvi muna mapurasitiki yokuvirisa pamusoro risanyatsobuda uye kugadzirwa, zvinobudirira kungoita uye kusimudzira mapurasitiki akashandiswa uye kugadzirwa uye kubudiswa kukura uye mberi.
Direct vachionana Pharmaceuticals kavha zvinhu uye mudziyo mikana
Nokuda kavha zvinhu, uye mudziyo mumwe akafanana, uye mushonga nokuda vakasarudzwa pakati nenhumbi chepakutanga uye kugadzirwa muitiro akasiyana, zvinodhaka kavha zvinhu uye mudziyo ari mamwe boka makopi anogona kuchaita rakanga kuonana zvinodhaka ichiputswa panze, uye kana uye zvinodhaka chakaitika mumwe vamwe basa, uye kana akanga zvinodhaka refu soaking ngura kure mapiritsi uye zvakananga pave mushonga rakanaka; uye, vamwe zvinodhaka unhu uye vanhu vose kushanda inovanza pabonde (kuti kuburikidza pamusoro zvinodhaka unhu uye vanhu vane General muedzo haagoni rakakodzera akawanikwa dambudziko).
Akasarudza zvinotaurwa uye zvinodiwa
1, kavha functionality
Pharmaceutical kugadzirwa fekitari, kuchengetwa, zvokufambisa, kushandiswa kwezvinodhaka, munguva zvinodhaka, anoridza kudzivirira zvinodhaka quality, yakakunakira zvoutano zvakanyanya.
2, kusarudza pfungwa
Zvinofanira kubva hunhu zvinodhaka kudiwa uye zvinodhaka kavha zvokuvakisa, idzidziso uye kugadzirwa pezvakaitwa, sarudzai chiedza, kudziya, chando, nemwaranzi kudzivirirwa kwazvo chinodzivirira ehupfumi, okisijeni, mvura nemhute, uye nezvimwe zvinhu, yavo isimbe, uye zvinodhaka kavha zvokuvakisa uye midziyo kana kuchinjirwa kune mumwe.
Coal kuti olefin chando asi kwete kupisa kupi dambudziko
2015, China marasha mabhizimisi olefin wakawedzera kugona kusunungurwa kunonoka pachena seiyi, akaronga gore rino vanofanira ane matani anopfuura mamiriyoni 3 mudziyo kugadzirwa, asi, sezvo October kuguma itsva mudziyo rakapararira anogona chete ane Tung Wah Group simba the yangtze River petrochemical uye Pucheng yakachena simba, uye maererano yakavimbika mashoko akati, zvinotarisirwa kuti gore rino rechipiri hafu kugadzirwa matani 350,000 / makore muMongolia Rwomukati refu Thai simba PP mudziyo kuchaita kumbosiyiwa kuna 2016, uye iri kutarisirwa November kuguma ngarurege kubva muna marasha chakakandirwa guru, gore rino anogona kutyaira pari achiri asina kusunungurwa kusarudza mashoko. Zvichakadai, Changzhou Fude, Guangzhou petrochemical uye Qinghai Salt Lake anewo yakasiyana nguva sokunonoka. Marasha kuti olefin haisi zvibhakera vainonoka, nzira?
Taurai chokwadi, nyika vanhu mabhiriyoni 1,3 dzakaonda-mafuta ane zvinopfuura 10 marasha gasification mano haisi kwazvo, asi kutaurwa, vanoita vakawanda bullish nokuda kwoupfumi tariro marasha gasification. Saka kwayo tava kuderera purofiti uye kugadzirwa kuva pamwe mhosva. Kwerinenge gore, mitengo mafuta dzakawanda kuwira kubva pamusoro, mumwe slump iro zvinogona, refu yakaderera kuvhunduka chaizvoizvo miti kuti olefins hukuru pfungwa kwete chete michina iri akura, uye mutengo riri isingadhuri. Marasha kuti olefin purofiti nani zvishoma nezvishoma akanyangarika panguva imwecheteyo, sezvo PP, Pe musika mutengo anoramba achiwira, mafuta zvinhu uye marasha zvigadzirwa kunyenga achangopfuura mazuva kuderedza, marasha makemikari indasitiri yakaderera Pricing nani hatichamuzivi. In PP Somuenzaniso, iye zvino marasha kusvika olefins mabhizimisi kubva marasha kusvika polypropylene mbishi zvinhu mari, mari mari uye kutarisirwa mari iri Verengai kunhivi 7000 Yuan / tani, pamwe PP musika mutengo musiyano, vamwe makambani kunyange mari yakarasika, Tingawaneiko , uye nyaya, ramangwana kukura marasha kuti olefins anganzi zvisinganzwisisiki.
Chokwadi, kuwedzera kune yakaderera mutengo mafuta akavarambidza izvi mudzimba marasha kusvika olefin kugadzirwa slowdown chirongwa chikuru zvinhu, unyanzvi hwokugadzira zvinhu, guta guru, Environmental Impact kupima uye mibvunzo yakatevedzana, uye chinangwa zvinowanzovapo kutyaira ari kunonoka mukoto. Yakafanotaura kuti kana mitengo mafuta dzakawanda kuramba panguva kumativi 50 madhora mudende, vanofanira kuzodzosera kuongorora vangangoramba marasha kuti olefins zvinotarisirwa.
PP mitengo achifambirana pasi pakati regiravhiti "anowira pamusoro" apo?
PP chikuru kunaka zvinhu pamisika mune ramangwana;
1 uye akawedzera kwamira, kutyaira itsva petrochemical miti haisati zvisingawanzoitiki, hapana chinokosha kuchinja musika wedzerai.
2, chokupedzisira kudiwa vakatevera kumusoro kuneta, mafekitari vakawanda kugamuchira kumbomira, rambai pamusoro-kudiwa zvokuvakisa kuramba zvakajairika kugadzirwa.
3 kusava netariro yokutonga, basa Provider, vakawanda yakawedzera purofiti-kugoverana ngaakuitirei, chengeta ayo Inventory yakaderera.
4, "emiti mbiri" petrochemical mumatanda pakugumburwa, aimbova-mabasa Warigirwa, nemitengo yakaderera kuramba yakarova kumusika.
5, PP pfupi iri neramangwana pamusika-nesimba, chikuru zuva nezuva yakaderera okusuma, chinovhiringidza kuti gwapa dzokutengeserana nechido, nepamusika dzose zvaoma.
6, dzakawanda mafuta mitengo iri simba, pasinei nemateru nezvisingafadzi panguva, asi akakundikana kuramba, asi kukanganisa gwapa musika PP.
Dawn polyethylene musika yakanyarara kuti yakarebesa?
Kubva musika, chikuru zvikonzero kukanganisa Pe musika vari: nechokumusoro kwerwizi pamusika kunyatsogona nemushonga uye kudiwa, Pricing mitemo kuti petrochemical emakambani uye Linear zvinoitwa neramangwana.
Nechokumusoro kwerwizi misika: mitengo mafuta dzakawanda kubvira akakwirira $ 110 regore rakapera mangwanani chokururamisa nacho. Panguva ino, United States New York kwakafumuka mafuta neramangwana mitengo kuyangarara kumativi $ 40, Brent kwakafumuka mafuta neramangwana mitengo kuyangarara kumativi $ 44. Supply rutapudzo, simba kudiwa, yakakwirira inventories kwakafumuka mafuta acharamba kudzora mutengo, mukuru uwandu zuva ukazvikudza, mafuta mutengo rebound simba. Asian raive nebutiro, nokuda zvakasimba zvitengeswa uchingodzikira kudiwa, kutsigira ethylene mitengo iri kuchamhembe Asia, zvisinei, zvichienzaniswa nguva chete gore rapera, nokupararira achiri rakakura.
Kunyatsogona zvitengeswa uye kudiwa: semarasha kwemakemikari miti zvishoma kugadzikana, pfupi kupaka uye yokugadzirisa tsaona dziri zvikuru November, asi akarasikirwa kugadzirwa nokuda kupaka uye kugadzira zana zviuru chete matani, saka musika romugove kufurirwa kuchiri kukuru . Zvakazoitwa musika matambudziko marasha gasification chirongwa, Shenhua Yu Lin matani 300,000 kubva vanokwanisa kunonoka kusvikira December kanda, akafukidza matani 300,000 kubva marasha chirimwa muna March gore rinouya iri kutarisirwa kuisa mukati. Mukudhinda marasha gasification chirongwa, kunyange zvazvo zvakaoma kurova kwenguva pfupi muna PetroChina uye Sinopec ari mapurasitiki pamusika mutungamiri, asi zvishoma nezvishoma zinyekenyeke indasitiri kubva chindingindingi mari, musika anotarisana nematambudziko. Kudiwa, mune mashoko akapoteredza upfumi paanochinja, kuti mapurasitiki indasitiri havagoni kuva neizvi. Varayirwa, uye pakugadzira zvinhu gore rino pane mumakore apfuura, mapurasitiki manufactures guru uye svikiro emakambani uchishanda 70%, zvokurima emakambani kushanda muna 60% -80%, fekitari hunde murombo zvakakukurudzira, vashoma zvokuvakisa seboka, zvakaoma kutsigira pamusika wemari. Kana simba kudiwa mamiriro ezvinhu anoramba atambudze musika Outlook.
Petrochemical indasitiri: pasi pokudzora oiri ichakasangana nezvimwewo / neramangwana vari pasi, iyo remunharaunda akatevedzana chekawo mutengo petrochemical, mafuta, kupera rutsigiro kutengeswa panguva iyoyo, rinoratidzawo kuti kuchine vamwe kumanikidzwa pamusika wemari netariro yakawedzera, zvichiguma kunopindirana pamusika usimbe nesimba. Kuguma mwedzi ichi, mitengo mafuta kurega kuwira shure pakarepo musika zvakanaka rutsigiro simba, asi inogona kuenderera rebound Zvakaoma kufungidzira mune ramangwana mutengo kwakafumuka mafuta uye neramangwana dzinokura acharamba kuva chinhu chinokosha pamusoro mutengo petrochemical.
On 2016 polypropylene indasitiri kukura
By December, kumativi 2015, panguva yakaderera mutengo dzakawanda oiri ichakasangana nezvimwewo, kuroorwa uye akawanda kunaka zvinhu zvakadai zvitengeswa uye kudiwa kusaenzana raparadza, polypropylene kuChina uye kunyange rose mapurasitiki indasitiri paanochinja, akawira mitengo, uye ramangwana akazadzwa mubvunzo mavanga. Kunyange mumakore achangopfuura, kugadzirwa polypropylene tiwedzere michina, budiriro michina vakaita yakawanda mberi, asi zvinhu hunokosha kumusoro akawedzera ukoshi achiri anofanira kupinza ruzivo uyewo kuvimba kupinza. Pamwe chete mutengo zvigadzirwa National kuMiddle East, kudzvinya misika yedu, mabhizimisi makwikwi zvikuru kwazvo. Izvozvo. Where vatange kugadzira Qualitative achikwakuka zvipfuwo p emaoko.
Kunyange zvazvo polypropylene Unit nhamba, asi vashoma kugadzirwa scale, chimwe-chikwata kugadzirwa vanokwanisa ishoma, zvichiita kuti usimbe kugadzirwa, yepamusoro simba rakawanda. Saka, tinofanira danho kubva shure kugadzirwa vanokwanisa, chengetedza indasitiri mukana gadziriro kuitira kuti chirongwa chitsva chikero uye muitiro zvasvika International yemhando sandara, kuvandudza musika makwikwi akaitwa kuedza chigadzirwa unhu uye nyika-kirasi.
Chechipiri, China zvemichina kukura chinzvimbo, anofanira kuwedzera mano akazvimirira utsanzi uye kwemaindasitiri kwazvo yokutsvakurudza uye kukura zvigadzirwa nekukurumidza, kushingaira club munyika polypropylene tiwedzere michina uye chikumbira kuti dzikurukure makwikwi zvezvipfuwo michina, vachigurisira pakakoromoka pakati zvinangwa dzakawanda.
Three ano Impact copolymer polypropylene zvigadzirwa zvinhu uye yakaderera kubva muzana zvokuvakisa, akadai mukuru-mugumo zvigadzirwa. Kuchinja kuti chigadzirwa mamiriro, simbisa ayo uchiedza kuva zvigadzirwa zvitsva kwava pedyo. Future mabasa matsva anofanira kukurukura high quality, hwaikosha-vakawedzera zvigadzirwa.
Mana, makasimbiswa okutengesa network, kuburikidza musika migero, mukana wokushandiswa kuchinja kugadzirwa kusangana kumusika vade, uye vakagadzirira nokutonga musika kudiwa ruchatibatsira makambani ichengetedzwe njodzi.
PBT Musimboti-vakaruka rushava musika kudiwa nekuti
Tongxiang musika chinodikanwa
Muna Whitehead Textile pamusika rose akatambura kana chando achisvika, Tongxiang musika zviri imwe nyaya. Zvinonzi kunzwisisa kuti Tongxiang cored mukutevedzera Tsuro bvudzi mutsvuku pamusoro pamusika somoto munguva yechando, zvinoda Kuputika, kuunza kudziya kuchitonhora pamusika. Parizvino, zvakavhenganiswa donje Kukosa chinoumba-vakaruka mutsvuku muchina nenhumbi, kubva mbishi zvinhu kusvika PBT zvinhu zvenaironi, dzinoturwa havatorina. Maererano nenhamba, kuti donje Bale kumusoro 35% kare mwedzi miviri, kukurukura kuti mazuva 15; Musimboti chishongedzo mudziyo mari akamuka 38%, kukurukura nguva chinoshanda kuna mazuva 20. zvirevo mutsvuku, asi anofanira dzakarongwa. Ukuwo, nepamusika ichangopfuura kuzotenga chiedza kuvheneka nomuzvarirwo vakakosa dzakawanda, zvakakomba havatorina ezvinhu ari pamusika. This Flash pfupi internet chinoumba-vakaruka rushava Kugadzirwa Flash vokunyepera Tsuro bvudzi mbishi zvinhu.
Zhangjiagang fekitari Kugadzirwa PBT chinoumba-vakaruka rushava
To mikuru pasuru makirisito yakapfava kugadzirwa chawo Zhangjiagang of chigadzirwa guta tubhokisi, kuchinja inofungidzirwa Pari kugadzirwa PBT pasuru makirisito yakapfava midziyo ine pedyo 400 Taiwan, ichi nhamba richiri kuramba ruva, pari omunharaunda kugadzirwa zvakawanda fekitari huru kusimbiswa diki kwakaita kugadzira mhando fekitari, chikamu fekitari kurimwa zvinoenderana ane harina hafu kumusoro, huru amoniya Lun pasuru makirisito yakapfava fekitari kugadzirwa hama ngwarira, chikamu makomborero nani amoniya Lun pasuru makirisito yakapfava fekitari haaiti kugadzirwa, asi pamwe PBT pasuru makirisito yakapfava pawaitengesa mberi, Join PBT ane vachiwedzera mafekitari mu musimboti-vakaruka mutsvuku kugadzirwa.
Chii PBT faibha?
PBT rudzi rutsva polyester fibers, kazhinji kwakavakirwa PTA zvakananga esterification pamwe BDO pakuburitswa, uye ipapo rakagara condensation maitiro, uye zvadaro uchanyangadika Kukosa uye PBT fibers. 30% ~ 60% PBT internet elongation, kwakavharwa nenyama kupora pane polyester uye zvinhu zvenaironi, spandex mu isingasviki; Uyezve, PBT faibha ine Rigidity guru uye achinje yakadzikama, bulkiness, curl wakanaka uye shinda kunzwa, saka mune dzimwe nzvimbo rejira anewo mukuru zvinogona.
Plastic chivakwa templates dzaFord nokuda mukugadzira mapurasitiki template zvinhu
1, mvura yakanaka nemishonga ine epurasitiki kuvaka templates dzaFord. Kunyange kana kunyudzwa zvizere mvura kwemazuva akawanda, kana deformation nokuda unyoro. Ko achaora ngura.
2, uye simende neremwana, isanamira, kusunungurwa nyore pashure kuvakwa kana deformation nokuda adhesion yacho samende.
3, mukuru kushanda, unhu hwakanaka epurasitiki chivakwa templates dzaFord. Pakuvaka chivakwa pamusoro risina mvere, pasina wechipiri nadzurudzo.
4, asi muitiro, anovandudza kushanda okuvaka. Kana template chinogadzirwa panguva imwecheteyo, Pretreat iyo templates, kuwana rusvingo avaiita.
Pe epurasitiki jira dzaFord kupinza zvigadzirwa
epamba Pe epurasitiki jira kugadzirwa mutsetse, chikuru nemagetsi zvinoriumba vari kupinza zvigadzirwa edu, yakakwirira mwero kushandisa michina, kugadzirwa kumhanya, nyore kuvhiyiwa, mutengo asingasviki 1/10 pamusoro okusuma kupinza michina zvakafanana. Kugadzirwa huni-epurasitiki bwendefa pamwe midziyo, PVC nehuni upfu, chirimwa mashanga sezvo mbishi zvinhu, extrusion Kuumbwa kwacho kubvira chigadzirwa unhu kundosangana mureza zvinodiwa dzimwe zvigadzirwa zvakafanana.
Kurimwa ndiro moto-uchapupu, unyoro-uchapupu, moto-retardant features, zvinowanzoshandiswa kuvaka, kushongedzwa uye kugadzira uye ane pahupamhi kumusika tarisiro uye hunogara yokutengesa zvinogona. Wooden mapurasitiki panzvimbo yamatanda, kudzivirira dondo pfuma; yemapuranga mapurasitiki anogona kudyara uswa, kuderedza kwezvakatipoteredza kusvibiswa; plywood mapuranga kubvisa chena kusvibiswa, nokunakisa zvakatipoteredza.
Pezvakaitwa: sawdust (internet) nokuomesa, wedzera yakawanda huni upfu; kuduku kuchinja, asi anogona kubereka PVC furo puranga, mupunga bran anogona kuisa huni.
Pe epurasitiki jira dzaFord ane yakarongerwa SJSZ92 conical mapatya sikuruu extruder, DC shanduka kumhanya nemotokari, tembiricha kudzora Chinoshandiswa kupinza mavanga, ane paupamhi kumhanya-siyana, mukuru nemazvo tembiricha kuzvidzora, nyore kuti ishande uye hwakavimbika. Ebetsero Vacuum zvinoumba tafura, traction muchina, achicheka muchina uye kusunda puranga.
Zvaaishandisa makuru kutonhora mudziyo rekuona kuti jira simbi Anoumba mugumisiro. Track-mhando tarakita pamwe zvakarurama giya injini uye inverter, pamwe zvine chimiro, mukuru traction, traction, kudzikama uye zvichingodaro. Kucheka muchina ane yakavimbika uye yakarurama, yakakwirira nokuveza yakarurama munorumbidzirweiko, kusunda rack pamwe bvisika achapesana trolley uye chinokosha rabha unhani, pamwe haana unokuvadza zvinhu, nyore kushandisa uye zvichingodaro. Ebetsero muchina Unit pamwe programmable kudzora maitiro kutonga kombiyuta kana mumhuri mavanga, muchina kwakakwana anodzora zvakavimbika pakusimba.
Brief kuongorora kukura kavha zvinhu uye mitemo
China mapurasitiki kavha zvinhu indasitiri yazova rimwe choruzhinji Mazinga, 2011 maindasitiri edu kavha goho yakasvika mamiriyoni 130 Yuan, kuwedzera nokuda 20% gore, 2014 kana kusvika 2 tiririyoni Currencykuva, rakava wa14 muna 42 makuru maindasitiri munyika, rava chechipiri pakukura United States munyika yechipiri pakukura pasuru. Food kavha Makambani rokuzvidavirira inenge 1/3,, 2013 makore yose kavha indasitiri emakambani, China mapurasitiki processing emakambani pamusoro akasarudzwa saizi kugadzirwa zvasvika matani mamiriyoni 61,886, pamwe kugadzirwa kuti diki uye micro mabhizimisi matani anopfuura mamiriyoni 80 muna 2014, kushandiswa epurasitiki kavha zvigadzirwa akaita kupfuura matani mamiriyoni 100, izvo, kupfuura matani anenge mamiriyoni 20 zvokudya kavha mapurasitiki, saka kuchengeteka kwayo anogonawo kuva rinopisa musoro.
In epurasitiki zvokunyama uye mapurasitiki zvigadzirwa iri, uye mapurasitiki nebwe mapurasitiki zvigadzirwa kubudiswa famba siyana yokuvirisa mhando ane vakawanda yakasvika epurasitiki nebwe kana zvigadzirwa AA unhu, mune kubudiswa achiumba ari taifanira akawedzera vanofanira kuti maererano nani kubudiswa kwayo kuita, kana unhu, uye izvi kubudiswa yokuvirisa kuti chawo mamiriro unhu mukushandisa kwacho kana zvigadzirwa iri haana kudzikama, kuti kwakatungamirira hunokuvadza gasi kugadzikana uye kutama, kune vanhu upenyu kunounza ane vanofanira asina kunaka zvinhu pamusoro.
Zvikurukuru, hatidi chengetedza zvebhizimisi dzose vatevere makomborero. Heavy kushandiswa substandard mbishi zvinhu kugadzirwa, zvichitungamirira musika kuvhiringidzika; vamwe duku yokurenda mafekitari. Pacharo yakatsvuka zvinhu inoshandisa zviri pamutemo, iri muitiro, regai kusangana chikafu kavha kugadzirwa michina zvinodiwa, kurimwa asingadi zvinodiwa yokupedzisira chigadzirwa, rinounza kumusika yose anotsausa.
Saka kumativi epurasitiki zvokudya kavha yokunyorera dambudziko kuchengeteka kwave vakafunga vakava vanhu vakawanda kutarisirwa inopisa, China nokuda epurasitiki indasitiri yakatanga kunopera, uye kukura nokukurumidza, zvipfuwo kudiwa zvikuru, kwakaita kuti zvimwe zvakavanzika kubva pamusoro kusvika nenguva akawanikwa, kwezvipimo neezvitendero ari nguva uye kumusika danho anoenderana, ichi vamwe duku workshop mhando fekitari kuruboshwe ane kupona nzvimbo, apo kuti indasitiri kunounza ave akaipa pamusoro kushanda.